किन यस वर्ष चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा धेरै गैँडा मरे ? – Daunne News
किन यस वर्ष चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा धेरै गैँडा मरे ?
By Daunne News	 On चैत्र १०, १६:३२
रासस। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक कारणले चालु आर्थिक वर्षमा ३९ गैँडा मरेका छन् । प्राकृतिक कारणले एकै वर्षमा यति धेरै गैंँडा मरेको हालसम्मकै यो पहिलो हो ।
अहिले मरेको गैँडालाई बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ । गैँडाको ढाड मात्र देखिएको छ । झण्डै ६ महीनाअघि सुस्ताबाट उद्धार गरी ल्याइएको गैँडा ट्याङ्कीमा खसेको ढकालले बताउनुभयो ।